Unokukhetha njani amagama angundoqo okwenyaniso ukuze ufumane ukutyelela ngakumbi komsebenzisi?
Ukukhetha amagama asemgangathweni kwiwebhusayithi yakho ukufumana utyelelo olongezelelweyo lomsebenzisi kuya kuthatha inzame. Oku kuya kuba ngumsebenzi ochitha ixesha. Kodwa zonke iinzame zokufumana amagama angundoqo akwizinto eziphambili ziya kunikezelwa ukubuyela ngokutsha kutyalo-mali. Emva kwakho konke, akukho mqondo ekusebenzeni kakhulu kwaye uhlawula imali eninzi ekugqibeleni udale umxholo omkhulu, ongabonakali kubasebenzisi kwiluhlu lwe-Google yeziphumo zophando.
Ukuba uziva nje ulahlekelwe olwandle kunye noKhenketho lweeNjini zoKhenketho kunye namagama angundoqo amagama, ndilapha ukukunceda wenze ukhetho olufanelekileyo kwaye unamagama asemgangathweni angundoqo. Ngoko, makhe sifumane indlela yokwenza umxholo wekhasi olungenanto - бескаркасная детская мебель. Njengoko injongo yethu ephambili kukuba abantu bakho abajoliswe kuzo bazimisele ukuwufunda ngokuvuya, akunjalo? Kwaye iinjongo zokukhangela, ezifana neGoogle ngokwazo, zifanele ukuba nazo!
Isiqulatho sokuQinisekisa kunye nokuHlola okuHlangeneyo
Ngaphambi kwayo nayiphi na into, masibeke inkcazo kwiNgesi ecacileyo. Igama eliphambili ligama elibaluleke kakhulu ukuba ukuphequlula abantu basebenzise ukugqiba injongo ekugqibeleni yesicelo sabo sokukhangela. Ku lungile. Kodwa kuthekani ngeyona ndlela efanelekileyo yokukhetha amagama angundoqo ekhontenti kwiwebhusayithi yakho kwaye ujabulele ezinye izithuthi?
Ndincoma ukuba wenze isinyathelo emva. Makhe sibone inkqubo efanelekileyo yokukhetha amagama angundoqo amagama, ukusuka kwimbono yabathengi bakho. Emva koko, zenzelwe ukusetyenziswa ngokuchanekileyo ngala magama abalulekileyo kunye namagama abalulekileyo. Ukulandela ukucinga okulula kodwa okusebenza kakuhle, makhe sibone iindlela eziphambili zokugqiba umsebenzi ukususela ekuqaleni:
Phuma ucele abaphulaphuli bakho abajolise
Thetha nje ukuthetha nabathengi bakho, ngokomzekelo kwiingqungquthela zentlalo, iingxabano zeblogi, okanye iingxoxo zesifundo kwiWebhu. Buza abantu iziphi iingxelo abazenzayo ngokubanzi kwimveliso yakho. Uyamangalisa indlela abahlala bebiza ngayo loo mveliso okanye iinkonzo ojongene nazo. Unokumangaliswa ngobomi bokwenene-bomi kwisigama esisetyenziswe ngabantu ukwenza isicelo sokukhangela. Ekugqibeleni, zama ukujonga ukuba yeyiphi imigaqo emilenze emide ekufuneka isetyenziselwe umbuzo wesicelo ekubhekiswe kuyo kwimveliso okanye iinkonzo zakho.
Hlalani uphando kwiMidiya yoLuntu
Namhlanje, indawo yoLuntu lweMidiya iqhutywe ngabantu abafuna ukukhangela kwi-Intanethi kuninzi into abayidingayo. Kwaye kukho iingxoxo ezininzi, ukuhlaziywa, ukufundiswa kunye nezinye izinto eziwusizo kuwe. Mane uhambe kunye noluntu olunxulumene noluntu, olufana ne-Twitter, okanye i-Facebook, ukuza ubone ukuba ngubani okwenene abantu abakutshoyo okwangoku, kunye nantoni na amagama angundoqo asetyenziswayo ukubhekisela kwizihloko zomdla wakho. Yaye qiniseka ukuba uhlolisise izihloko ezihamba phambili kwindawo yakho, okuya kuba luncedo.
Sebenzisa izixhobo zoBuchule beSiqulatho Uphando
Ngaphambi kwayo nayiphi na enye into, unokusebenzisa nje ifom ye-Google yokuphenya ngokuzenzekelayo.Ndithetha ukuba kufuneka uqale ukuthayipha ukubona iziphakamiso ezithandwayo kakhulu ezibonelelwe yi-injini yokukhangela, ngokubhekiselele kwizicelo zabantu abaphila. Ungasebenzisa kwakhona i-GooglTrends database ukuze unike ingqiqo enhle kakhulu kunceda ukhethe okulungileyo amagama angundoqo amagama. Emva koko, ndincoma ukusebenzisa i-Wordtracker. Ndiyakho ithuluzi elona lihle kunenjongo yethu, enokukubonisa isethi enkulu yedatha efanelekileyo njengoncintiswano lwangoku, umthamo wosesha, ucingisisa indawo yakho kunye nokunye okuninzi.